Iyo Apple Watch inoramba ichiwedzera kuwedzera kutengesa kunosvika kune avo vePadad | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch inoramba ichiwedzera kuwedzera kutengesa kusvika kune iyo yePadad
Kana paine mureza mudziyo muApple kunze kweiyo iPhone pachayo, izvi ndizvo iyo Apple Tarisa. Iyo smartwatch yekambani inova chimwe chezvinhu zvinotengeswa zvakanyanya mukota ino, ichidarika kunyange mari inowanikwa kubva mushanduro yapfuura yechigadzirwa.
Iyo Apple Watch Series 3 hapana mubvunzo chimwe chezvinhu zvakakosha zvigadzirwa maererano nemari inowanikwa mukati mekota ino kuApple. Vazhinji vakaona pakutanga kweApple Watch chigadzirwa chakanonoka, nemakwikwi ari kumberi uye nhasi iyo smartwatch chete inoramba ichitengesa zvakanaka iApple Watch.
Tim Cook, agara achidzivirira kutengesa kwechigadzirwa kubva pazuva chairo rekumisikidzwa muna 2014 uye aigara achitaura kuti chishandiso chewrist chaive chimwe chezvigadzirwa zvine zvakawanda zvinoratidzwa muApple. Uye zvakare, kumwe kubudirira kunotarisirwa kunowedzerwa, mune iyi nyaya maAirPods, ayo sevatsoropodzi, vashandisi nekambani pachayo vakati, mahedhifoni aya ave kubudirira chaiko.
Nhasi Apple ndiyo tekinoroji kambani inotengesa akanyanya smartwatches uye iri padyo chaizvo nekutengesa kunowanikwa neimwe yezvakakosha zvigadzirwa mune iyo brand, iyo iPad. Iyi mhedzisiro yezvemari mhedzisiro yakaratidza kuti nhau mumaawa pamwe nemukana wekuve wakanyanya kuzvimiririra ne iPhone yakafarirwa zvakanyanya, hongu, Series 3 haisi yese neLTE uye kuSpain nedzimwe nyika dziri kunze kweUnited States, France, United Kingdom neGerman isu tichakamirira kusvika kwako. Ivai chero zvazvingava, iyo Apple Watch ine nzvimbo yayo mumusika uripo uye zviri kuwedzera zvakajairika kuiwana paruoko rwevashandisi ve iPhone, chimwe chinhu pasina mubvunzo chinofanira kunge chiri mufaro wevakomana kubva kuCupertino vanoona yavo portfolio uye mufaro wevatengi vako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch inoramba ichiwedzera kuwedzera kutengesa kusvika kune iyo yePadad
"Google Home Max inonzwika kunge kadhibhodhi padhuze nePambaPod," sekureva kwaDavid Pogue
Ese eMac Pro mamodheru atove kupa zuva rekuwanikwa